Injabulo ona-74 ethola izincwadi zokushayela | News24
Injabulo ona-74 ethola izincwadi zokushayela
Johannesburg - "Akukho okungavimba umuntu ekutheni abe yilokho afuna ukuba yikho."
Lawa ngamagama kaSilas Ramalete oneminyaka engu-74 ubudala ngesikhathi ethola izincwadi zakhe zokushayela.
Leli khehla lase-Ext 25 eGa-Rankuwa, eTshwane, lithe kudala lalifisa ukuba nezincwadi zokushayela.
"Kodwa bengivilapha ukuya ngiyobamba olayini ngesikhathi ngisakhula. Okungenze ngathatha amakilasi ezincwadi zokushayela ngingakashoni ukuthi isifiso sami bekungukuzithola ngingakalali kobandayo," esho etshela iDaily Sun e-Ipeleng Traffic Department eMabopane, ngoLwesihlanu.
OLUNYE UDABA: Ithole iDiploma iShebeen Queen ena-60
Uthe abantu bashaqeka ngesikhathi eyolungiselela amakilasi okufundiswa ukushayela.
"Babengazitsheli ukuthi ngizophumelela ngenxa yeminyaka yami."
Lo mkhulu uthi wakwazi ukushayela ngenyanga eyodwa.
"Empeleni kwakulula, kwakungathi kudala ngishayela."
URamalete uthi ubehlezi enethemba lokhuthi uzozithola izincwadi zokushayela.
Amagama awabhekise entsheni athi ingaliphonsi ithawula, kufanele iphokophele phambili futhi ibe nentshisekelo yokufuna ukufunda izinto ezintsha.